နှစ်ချက်ကိုရွှေအခမဲ့အွန်လိုင်း slot က - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
နှစ်ချက်ကိုရွှေအခမဲ့အွန်လိုင်း slot က
အပေါ် Posted နိုဝင်ဘာလ 22, 2016 သြဂုတ်လ 4, 2017 စာရေးသူ အင်ဒရူး ဟာ Off comments နှစ်ချက်ကိုရွှေအခမဲ့အွန်လိုင်း slot ကပေါ်
သငျသညျအစဉျအမွဲ Las Vegas မှသို့မဟုတ်အတ္တလန္တိတ်စီးတီးမှဖူး အကယ်. ဖြစ်နိုင်နှစ်ချက်ရွှေပေါက်အပေါ်သို့လဲပါတယ်။ ဒါဟာဂန္ပါပဲ။ ဂတ်စ်နည်းပညာအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဒိုမိန်းရန်နှစ်ချက်ရွှေ slot ၏အောင်မြင်မှုကိုယူမယ့်အခွင့်အလမ်းကိုမြင်ရလဒ်ရိုးရှင်းတဲ့ပေမယ် slick နှင့်ဖျော်ဖြေမှု 3-reel အွန်လိုင်းဗီဒီယို slot ကဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအုတ်-and မော်တာကိုနှစ်ချက်ရွှေ slot "အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂိမ်းနည်းပညာ" (IGT) အမည်ရှိကုမ္ပဏီကဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိသည်။ အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဆော့ဖ်ဝဲကိုပံ့ပိုးပေး Vegas မှာနည်းပညာကဒီလောင်းကစားရုံဂန္တစ်ဦးကို virtual ဇာတ်ကားအဘို့အ IGT နှင့်ပဋိညာဉ်ဖွဲ့။
အွန်လိုင်းဗားရှင်းက၎င်း၏သော့ခလောက်အခွံမာသီး-and အဆွေတော်အနေဖြင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားပေမယ့်ယင်းတူညီဒီကဗျာဖြစ်ကြသည်။ သင်တစ်ဦးလှည့်ဖျားယူနှင့်ကိုယ်အဘို့ကိုတွေ့မြင်ချင်ပါတယ်လျှင်, သင် WGS ဆော့ဖျဝဲများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နှင့်အမေရိကန်ကစားသမားမှပွင့်လင်းသောအရာမိုင်ယာမီကလပ်လောင်းကစားရုံမှာနှစ်ချက်ရွှေ slot ကရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
သုံးယောက် reels တွင်သင် Lucky ခုနစ်ကွဲပြားခြားနား BAR သင်္ကေတများ, ချယ်ရီ, နှင့်နှစ်ချက်ရွှေအမှတ်တံဆိပ်များကဲ့သို့တူညီသောကောင်းသောအဟောင်းများကိုသင်္ကေတကိုရှာပါ။ အွန်လိုင်းနှစ်ချက်ရွှေပေါက်ကစားအခါဂန္သင်္ကေတများနှင့်စနစ်တကျ layout ကိုအဆိုပါလောင်းကစားဝိုင်းအတွေ့အကြုံကအရမ်းအကျွမ်းတဝင်ခံစားမိစေပါ။ ဤတစ် $ 25,000 အများဆုံးထီပေါက် Add နှငျ့သငျဟာအလွန်ပေါ်ပြူလာနဲ့ပျော်စရာအွန်လိုင်းဗီဒီယို slot ကရှိသည်။
QUICK အဖြစ်မှန်က Double ရွှေ slot
reels ၏နံပါတ်များ: 3
paylines အရေအတွက်: 1
min အလောင်းအစား / payline: $0.10
မက်စအလောင်းအစား / payline: $10
မက်စ်ထီပေါက်: 2,500 ဒင်္ဂါးပြား
Software ကိုပေးသူ: ဂတ်စ်နည်းပညာ
Double ရွှေ slot ဥပဒေသများ
ငါ့ကိုနှစ်ချက်ရွှေပေါက်ဆော့ကစားရန်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ကြောင်းပြော start ကြပါစို့။ အဆိုပါနှစ်ချက်ရွှေပေါက်အနိုင်ရပေါင်းစပ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ကအလွန်လွယ်ကူအောင်, သာ 1 payline နှင့်3reels ရှိပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်, ဒီ slot ကအကြောင်းကိုသင်သိရပါမယ်တစ်ခုတည်းသောအရာနှစ်ချက်ရွှေအမှတ်တံဆိပ်ဟာတောရိုင်းသင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်ကပျနိုငျကို double (1 အမှတ်တံဆိပ်၏အမှု၌) သို့မဟုတ် quadruple သင့်ရဲ့အနိုင်ရရှိတဲ့ (2 ဂေါ့၏အမှု၌) အခြားမည်သည့်သင်္ကေတ, အနှစ်ချက်ရွှေအမှတ်တံဆိပ်များအတွက် substitutes နေ။
နှစ်ချက်ရွှေ slot များအတွက်အကြွေစေ့တန်ဖိုးများကို $ 0.10 နှင့် $ 10 အကြားရှိပါတယ်။ အဆိုပါရရှိနိုင်အကြွေစေ့အရွယ်အစားများထဲတွင် $ 0.10, $ 0.25, $ 0.5, $ 1, $ 2, $5နှင့် $ 10 ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျ payline နှုန်း3ဒင်္ဂါးပြားမှတက်အလောင်းအစားဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပြီးတစ်ဦးတည်းသာ payline ရှိသေး၏။ ဒီအလှည့်ဖျားနှုန်း $ 30 မှာအများဆုံးလောင်းကြေးသတ်မှတ်။
သငျသညျအနိုင်ရနိုင်ပါတယ်အကြီးမားဆုံးဆုသင်တို့အဘို့ကစားဒင်္ဂါးပြား၏နံပါတ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တစ်ဦး $3ပေးချေမှုများအတွက်3ဒင်္ဂါးပြား: လိုင်းနှုန်း 2,500 ဒင်္ဂါးပြားအလောင်းအစားနေချိန်မှာသင် 25,000 နှစ်ချက်ရွှေဂေါ့ hit အကယ်. သင်ကအကြွင်းမဲ့အာဏာအများဆုံးနှိပ်ပါ။
သငျသညျတူညီသော3နှစ်ချက်ရွှေဂေါ့ထိမှန်နှင့်လိုင်းနှုန်း2ဒင်္ဂါးပြားအလောင်းအစားအခါပေးချေမှု $ 1,600 ညီမျှ 16,000 ဒင်္ဂါးပြားသည်။ 1 အကြွေစေ့လောင်းကစားနေစဉ်ကဒီလှည့်ကွက်လုပ်ပါနှငျ့သငျစုစုပေါင်း $ 800 တန်ဖိုးရှိ 8,000 ဒင်္ဂါးပြားအနိုင်ရ။
85 21 Prive ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
115 Yako ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
20 Playamo ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
80 အခမဲ့ Euromoon ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
Blackjack Ballroom ကကာစီနိုမှာ 120 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
Pocket အီးယူကာစီနိုမှာ 155 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
145 အခမဲ့ထီပေါက် Luck ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
140 Cool ကြောင်ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
105 အခမဲ့ Kaboo ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
မစ္စတာရင်ဂိုကာစီနိုမှာ 150 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
80 အခမဲ့ RealDealBet ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
Moobile အားကစားပြိုင်ပွဲကာစီနိုမှာ 150 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
100 ပေါက်စက်များကာစီနိုမှာ 99 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
Slotty ဂတ်စ်ကာစီနိုမှာ 65 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
115 အခမဲ့ PocketWin ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
85 WickedJackpots ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
ရတနာမိုင်ကာစီနိုမှာ 135 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
130 အခမဲ့တော်ဝင်ဂတ်စ်ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံ spins
100 အခမဲ့ Boogie လောင်းကစားကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
SlotoCash ကာစီနိုမှာ 105 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
ကွိုဆို slot ကာစီနိုမှာ 135 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
115 အခမဲ့ကလပ်ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
75Bet ကာစီနိုမှာ 18 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
0.1 QUICK အဖြစ်မှန်က Double ရွှေ slot
0.2 Double ရွှေ slot ဥပဒေသများ
3 ကာစီနိုဆုကြေးငွေ codes တွေကို 2019: